Halkan Ka Akhriso Dhacdooyinkii Ugu Waa Weynaa Ee Somaliland Ka Dhacay Sanadkii Galbaday Ee 2016-kii
Tuesday April, 24 2018 - 17:15:12
Sunday January 01, 2017 - 19:07:37 in by salman abdi
Hargeysa(AFKA);Dhacdooyinkii Ugu Waa Weynaa Ee Somaliland Ka Dhacay Sanadkii Galbaday Ee 2016-kii
December, 21,2016waxa heshiish dhexmaray Somaliland iyo KHaatumo, kuwaas oo ka soo saaray, kow iyo toban qodob oo ay isku afgarteen.
December 19,2016,wasaaradda Caafimaadka Somaliland oo sheegtay in deegaanada qaar ka dilaacay shuban biyood sababay dhimasho hal qof oo Boorama ku dhintay.
December 11,2016, Wasiirka Warfaafinta Somaliland, Cismaan Saxardiid Caddaani ayaa amar ku soo Rogay in Shirkadaha Isgaadhsiinta Somaliland baahiyaan wax xayeysiis ah, maadaama oo aanay liisan u haysan, isla markaana aanay shaqadoodda ahayn in kaalinta warbaahinta qaataan.
Wasiirka Warfaafintu wuxuu xusay in hora uga hadleen, isla markaana imika ku Wargali-nayaan in ay ku eekaadaan shaqadoodda ay liisanka u haystaan ee Isgaadhsiinta.
December 9,2016:, Dawladda Sucuudiga oo shaacisay inay xayiraad ku soo rogtay muddo aanay sheegin xoolaha Soomaalidda ee wadankeedda loo iibgeyn jiray.
November 26,2016,: Taliska booliska degmada Faro-weyne ee Somaliland oo u dhaw Xuduudka ay wadaagaan Somaliland iyo Itoobiya ayaa ku soo qabtay Gaadhi ay saarnaayeen Siddeed Askari oo ka tirsan ciidanka dawlad deegaanka Soomaalidda Itoobiya ee Liyuu booliska loo yaqaan oo la sheegay inay ku soo xadgudbeen gudaha Somaliland. Markii dambe waxa dib loogu celiyey xoriyadooddii.
November 23,2016:waxaa magaaladda Hargeysa kugeeriyoodayAbwaan, macalin, Mu’aluf,Maxamed Jaamac Kaydoo Muddooyinkan dambe bukaan jiif ahaa. Abwaan Kayd wuxuu ahaa macalin iyo hal abuur wuxuu hal abuuray Riwaayado iyo heeso badan oo ay ku luuqeeyaan Fannaaniin Caan ah sida Khadra Daahir Cige, Cabdiqaadir Macalin Juba, Axmed Cali Cigaal,Saynab CIge iyo kuwo kale oo faro badan.Marxuum Abwaan Maxamed Jaamac Kayd waxaa la sheegaa in uu dhashay hiilaadii 1952-kii oo ku dhashay magaaladda Burco ee gobolka Togdheer.
November 22,2016: Xukuumadda Somaliland, ayaa la Sheegay in ay joojisay qaxootigii ka imanayey dalka Yemen, kuwaas oo isugu jiray Soomaali iyo Yemen arrimo lagu sheegay arrimo caafimaad, ka dib markii cudurka Daacuun ka dilaacay wadanka Yemen.
November 22,2016: Jen. Maxamed Nuur Galaal oo nidaamkii Siyaad Barre noqday Taliyaha Xoogga dalka Soomaaliyeed, ayaa booqasho ku yimid magaalada Hargeysa, isla markaana kulan la yeeshay madaxweynaha Somaliland.
November 13,2016:, Tartankii Cayaaraha Gobollada ee Somaliland, ayaa lasoo gunaanaday, waxaana tartankan markii ugu horreysay ku Guulaystay gobolka Awdaloo laba gool iyo hal gool kaga badiyey gobolka Saaxil.
November 10,2016:, Ganacsatadda Somaliland ayaa guddida abaaraha ku wareejiyey lacag deeq ah oo ay ugu tallogaleen dadka abaaruhu saameeyeen, waxaanay lacagtaasi dhamayd Hal milyan iyo shan iyo sodon kun oo doolar.
November 7,2016: Maxkamada Gobolka Hargeysa ayaa Xukunno ku ridday afar qareen oo hore loogu eedeeyey inay Baraha bulshadda ee Faceboogga ku faafiyeen dacaayaddo ka dhan ah garsoorka Somaliland iyo iska hor keen bahda garsoorka.
November 6,2016:, Madaxweyne ku xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa dhaawac ka soo Gaadhay lugta bidix ka dib markii uu ka siibtay marmarka gurigiisa.
November 5,2016, Khilaaf Xooggan, ayaa soo kala dhexgalay labadda garab ee xisbiga UCID u qaybsan yahay, isla markaana waxay ku dhowaaqeen inay laba shir oo aan caadi ahayn ku kala qabsanayaan magaaladda Hargeysa.Haseyeeshee, guddida diiwaangelinta ururada ayaa labadoodaba ka joojiyey shirarka ay ku baaqeen inay qabsanayaan.
November 3,2016:,Madaxweynaha Somaliland, Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, ayaa sheegay in magaalada Addis ababa ee dalka Itoobiya uu kula kulmay Madaxweynaha Khaatumo, Cali Khaliif Galaydh.
Octobar 30, 2016,:Guddiga Doorashooyinka Qaranka Somaliland, ayaa beeniyey Warar sheegaya in la masxay Qayb ka mid ah kaydadkii Diiwaan-gelinta Cod-bixiyeyaasha, isla markaaan dadka wararkaasi ka qora ku tilmaamay kuwo doorasho diid ah oo ceebaynaya komishanka doorashooyinka.
Octobar 19,2016:, Shir-weynihii Golaha Dhexe ee xisbiga mucaaradka ah ee WADANI, ayaa maalintaasi ka furmay hoolka weyn ee hoteel Maansoor ee magaaladda Hargeysa.
Octobar 21, 2016:, xisbiga WADDANI doorashaddii waxa ka jabay garab uu hogaaminayo ku xigeenkiisa 1aad Axmed Mumin Seed, ku xigeenkiisa 2aad Faarax Dheere iyo xubno badan oo ka mid ah guddida fulinta, kuwaas oo ku dhawaaqay garabka toosinta xisbiga WADANI.
Octobar 22,2016: Xukuumadda Somaliland ayaa maalintaasi ku wareejisay Guddiga Doorashooyinka Qaranka lacagtii doorashooyinka qaybtii xukuumad ahaan lagu lahaa inay bixiso,lacagtaasi oo dhamayd afar milyan oo doolar.
Octobar 5,2016:, Isbahaysiga Dimuqraadi doonka xisbiga KULMIYE ee ka biyo-diiday Shir-weynihii Xisbiga KULMIYE ee lagu doortay Muuse Biixi Cabdi, ayaa maalintaasi shaaciyey inay si rasmiya ugu biireen xisbiga mucaaradka ah ee WADANI.
September 26, 2016:, Guddoomiyaha Maxkamadda sare Somaliland Aadan Xaaji Cali, ayaa ku dhowaaqay inuu aqbalay codsi madaxweynaha Somaliland uga yimid oo ahaa in qaraar laga gaadho in la kala qaado doorashooyinka Madaxtooyada iyo Wakiiladda.
September 23, 2016:, Guddoomiyaha maxkamadda gobolka Hargeysa, ayaa markii ugu horeysay xukuntay dad lagu eedeeyey inay laaluush bixiyeen iyo kuwii qaatay oo uu ku jiro mid ka mid ah garsoorayaaasha.
September 19, 2016:, waxay Madaxtooyaddu ka hadashay dhowaaqii ka soo yeedhay beesha caalamku ay ku qaadaceen in doorashadda dib loo dhigo, isla markaana ku tilmaamay mid khalad ah.
September 19,2016:, Maxkamada sare ee Somaliland ayaa maalintaasi billowday Dhagaysiga dacwadda u dhexeysa labadda garab ee xisbiga UCID, ka dib marka garabka gudoomiyaha xisbiga Faysal Cali Waraabe racfaan ka qaatay go’aankii ay hore usoo saareen guddida diiwaangelinta ururadda siyaasiga iyo ansixinta xisbiyada.
September 19, 2016:,waxa uu Xisbiga Mucaaradka ee WADANI si weyn uga hor yimid kala qaadistii lagu sameeyey doorashadda ee wakiiladdana dib loogu dhigay.
September 17,2016:, golaha Wakiilada Somaliland ayaa ansixiyey oo ogolaada in la kala qaado labaddii doorasho ee Wakiiladda iyo madaxtooyadda, isla markaana dib u dhigay golaha Wakiiladda.
Septemer 16,2016,:Wafti uu horkacayo Agaasimaha wasaarada Arrimaha Dibadda Britain oo ay Wehelinayeen Saraakiil kale, ayaa kulan la yeeshay Madaxweynaha Somaliland si ay ugala hadlaan go’aankii dib loogu dhigay doorashada golaha Wakiiladda, waxaanay ku adkeeyeen inay ka noqdaan go’aankii doorashadda u kala qaadeen.
September 10,2016:,madaxweyne Siilaanyo oo kala qaaday labaddii doorasho ee qorshuhu ahaa inay mar wada dhacaan, dib u riixay doorashaddii wakiiladda tii madaxtooyadda wakhtigeeddii u daayey.
August 23,2016:, wasaradda arrimaha dibadda Somaliland ayaa soo bandhigtay qoraal codsi ah (Petition Letter) ay Saxeexeen hal milyan iyo Kow iyo Labaatan kun oo qof (1.021.000) oo Shacbiga Somaliland ah, kuwaasoo beesha Caalamka ka dalbanaya inay aqoonsadaan jiritaanka Somaliland.
August 14, 2016:, waxa ciidanka Amniga ka hor joogsadeen fanaanada Nasteexo Indho oo doonaysay inay Hargeysa bandhig faneed ku qabsato, waxaana amarkaasi soo faray ciidanka wasiirka Diinta iyo Awqaafta oo sheegay inuu isagu joojiyey.
July 25,2016: xukuumadda Somaliland ayaa sheegtay in wefti ka socda Kenya ka wada hadleen arrimo ay kamid yihiin sidii Jaadka Kenya loogu iibgeyn lahaa Somaliland.
Jully 25,2016:, Somaliland oo diiday inay xidho dugsiga Nile Academy ka dib markii dawladda Turkiga codsatay in dugsigaasi oo uu leeyahay nin mucaarad ku ah madaxweynaha Turkiga oo ay sheegeen inuu ka dambeeyey inqilaabkii fashilmay ee Turkiga ka dhacay, waxaanay xukuumadda Somaliland ku dooday in haddii ay dambi ka galeen Somaliland uun laga saari karo balse aanu sharcigu u banayn in dad aan dambi ka galin Somalilnad aanay banaanayn in dalka laga saaro.
July, 19,2016:,; Raashinka Wadaniga loo yaqaan ee ka soo baxa Beeraha Waddanka gudihiisa, ayaa isticmaalkoodu muddooyinkan dambe sare u kacay,isla markaana Habeenkii inta badan dadku cashadda ka dhigtaan cunto wadani.
July 19,2016:Xukuumadda Somaliland, ayaa sheegtay in aanay wadanka ka saari doonin Hay’adda Nile Academy oo dugsi waxbarasho ku leh magaaladda Hargeysa, Hay’addaasi oo xukuumadda Turkiga ku eedeysay inay lug ku lahayd Inqilaabkii fashilmay ee maalmo ka hor ka dhacay wadankaasi.
July 22,2016:, Qunsulka TURKIGA ee Magaalada Hargeysa, Muzaffer Yuksel ayaa sheegay in xukuumadda Somaliland u gudbiyeen in albaabadda loo laabo hay’adda Nile Academy oo uu leeyahay Sh. Fetxullah Gulen oo ah ninka ay ku eedeeyeen inuu ka dambeeyo Inqilaabkii fashilmay ee Turkiga ka dhacay.Waxaa kale oo uu sheegay in Turkigu damacsanyahay in muwaadiniinta Somaliland ku iman karaan Turkiga Passporka Somaliland iyo in muddooyinka soo socda ka hirgalin doonaan mashaariic horumarineed.
July 17,2016:, waxa magaaladda Hargeysa kugeeriyooday fannaankii Cabdullaahi Mire Dacaroo loo yaqaan (Shay Mire Dacar) oo ka mid ahaa fannaaniinta Soomaaliyeed kuwa codkooda aadka loo jecel yahay, kaasi oo dhawaanahan xanuunsanayay. Shay Mire Dacar wuxuu ku dhashay Magaalada Ceerigaabo ee Gobolka Sanaag sanadkii 1969-kii wuxuuna fanka billaabay badhtamihii sideetamaadkii, isagoo caan ku ahaa heesaha qaaciga ah ee kabanka lagu tumo, kuwaasi oo uu ku soo jiitay dad badan.
June 20,2016:,Shan wariye oo ka Hawl-gala Gobolka Gabiley, ayaa Ciidamada Liyuu booliska dawlad deegaanka Itoobiya ka qabteen Magaalo Xuduudeeda Tog-wajaale, kuwaasoo markiiba loo dhaadhiciyey magaaladda Jig-jiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalidda Itoobiya, muddo ka dibna waa la siidaayey.
June 14, 2016:,Prof. Axmed Ismaaciil Samatar - oo ah Aqoon-yahan si Weyn looga yaqaanno dhulka Soomaalida iyo Qaybo ka mid ah Caalamka, ayaa shaaciyey inuu ku biiray xisbiga KULMIYE ee talada Somaliland haya.
June 8,2016: ayaa laga soo sheegay dhiilo dad lagu laayey deegaanka Jaamac Dubad oo lagu laayey in ka badan kow iyo labaatan qof oo Afar haween yihiin, waxaana la sheegay in si ula kac ay u laayeen ciidanka Itoobiya, waxaana deegaankan lagu laayey dadka oo ah Jaamac Dubad oo Bariga ka beegan Degmada Gaashaamo oo hoos timaadda gobolka Dhagax Buur ee bariga Itoobiya.Madaxweynaha Somaliland ayaa dadkaasi la laayey ka hadlay waxaanu sheegay in dawlada Itoobiya baadhis ku samayso dadkaasi shacabka ah ee la laayey.
May 11,2016:,Somaliland oo ka hor timid in maamulka Hawada sare lagu wareejiyey Soomaaliya, waxaanay sheegeen in heshiishkii Turkiga qayb ka ahayd in maamulka Hawadda laba guddi oo labadda dhinac ka socda wada maamulaan.
MAY 10,2016,:Xukuumdda Somaliland, ayaa heshiish xaga horumarinta dekadda Berbera iyo wadadda isku xidhaysa Berbera iyo Itoobiya kala saxeexday shirkadda Dubai World ee laga leeyahay dalka Isku tagga imaaraadka Carabta. Heshiishkan ayaa ka dambeeyey ka dib casuumad uu madaxweyne Siilaanyo ka helay madaxweyne ku xigeenka isku taga imaaraadka ahna Ra’isal wasaaraha dalkaasi Mohamed Bin Rashiid Al makhtoum.
April 21, 2016:, Wasiir-u-dowlaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Somaliland, Maxamed Muuse Diiriye, ayaa sheegay wiil 12 jir ah oo lagu qashay degmadda Ballidhiig ee gobolka Togdheer, taas oo la sheegay in markii dambe ciidanka amnigu gacanta ku dhigeen.
April 6,2016:Roobkii ka da’ayey degmada Dilla oo socday ku dhawaad Shan saacadood oo xidhiidh ah ayaa shan qof ku dilay magaaladda Dilla ee gobolka Awdalka, halka khasaare maaliyeedna uu geystay.
April 7,2016:madaxweynaha Somaliland ayaa qasriga madaxtooyada ku casuumay guddi siday deeq lacageed oo ka yimid Soomaaliya, kuwaas oo ka qaybqaadanayey taakuleynta loogu jiro dadka abaaruhu saameeyeen ee Somaliland, gaar ahaan gobolada galbeedka Somaliland. Weftigaas oo ka koobna 12 xubnood oo isugu jira salaadiin, culimo awdiin, ganacsato, haween iyo ururada bulshada rayidka ah ayaa waxay dalka keenen deeq lacageed oo dhan hal milyan oo doolar, kaga qaybgelayaan xaalada abaaraha ee dalku ku sugan yahay.
March 16,2016:,waxa dhacay is rasaas u dhexeysa ciidanka Somaliland ee Badda iyo ciidanka Badda ee Jabuuti, waxaana ku geeriyooday hal askari oo SOmaliland ah iyo mid dhaawac noqday, taas oo Somaliland ka abuurtay xiisad u dhexeysa Somalialnd iyo Jabuuti.
March 16,2016,: Illaa afar qof ayaa abaarta baahsan ee ka jirtagobolka Awdal ku geeriyooday, iyadoo dad iyo xoolaba lagu hawlan yahay sidii loo soo guri lahaa.
January22,2016:,Madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa Kulan la yeeshay masuliyiinta kala duwan ee dawladda si wax looga qabto qiimo jabka ku yimid Shiling Somaliland, isla markaanaa kor loogu soo qaadi lahaa.Toban bilood ka dib imika oo aynu ku jirno bilihii u dambeeyey ee sanadkan 2016 waxa mar kale hoos u dhac ku yimid qiimaha Shilig Somaliland.
January 19,2016:, Ciidanka Amniga Somaliland ayaa billaabay ololaha lagu raafayo dadka Ajanabita ah ee ku nool Somaliland.
Janury 19,2016:,Magaalada Hargeysa waxa lagu dilay nin la sheegay inuu kasoo jeedo Dawlad-deegaanka Soomaalida ee Itoobiya; iyadoo dilkiisa uu Saxaafadda u xaqiijiyay guddoomiyaha gobolka Maroodi-jeex, Maxamed Maxamuud Cali.
January 14,2016:,Waxa magaaladda Hargeysa aas qaran loogu sameeyeyAbwaan Cali Sugulle Dun-carbeed, waxa ka soo qaybgallay inta badan Ab-waanadda Soomaaliyeed, fanaaniinta, siyaasiyiin, dhalinyaro , waxa kale oo Maydka Ab-waanka la socday Fanaanka caanka ah ee Axmed Naaji Sacad iyo fanaaniin kale oo dalka Imaaraadka Carabta ka soo raacay.
January 12,2016:Maxkamadda gobolka Hargeysa ayaa xukun iyo ganaax ku riday laba nin oo dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka Pakistan oo mid ka mid ah.
January 6, 2016:Somaliland xabsiga u taxaabtay. Maxamed Rasa iyo Hashim Makera oo Somaliland ku soo galay ganacsade ayaa lagu helay inuu muddooyinkii u dambeeyay Somaliland ku fidinayay Mad-habta shiicada, waxaanay Maxkamada Degmada Hargaysa ku xukuntay hal sanno oo xadhig ah iyo saddex milyan Shiling Somaliland.
January 11, 2016:, ALLAHA u naxariistee waxaa ku Geeriyooday cisbitaal ku yaalla dalka Imaaraadka Carabta Abwaankii caanka ahaa ee SoomaaliyeedCali Sugulle Cigaaloo loo yaqaan Dun carbeed, waxaanu muddo ku xanuunsanayey dalkaas. Abwaan Cali Sugulle ayaa taariikh dheer ku lahaa fanka dalka, wuxuuna qayb libaax kasoo qaatay xilligii xornimo u dagaalanka ee dagaalka kula jiray gumaystihii Ingiriska, waxaanu suugaan aad u badan ka tiriyey wakhtigaasi.
January 9,2016;,Sadexda Xisbi ee Somaliland & gudiga doorashooyinka ayaa kala saxeexday xeerka hab-dhaqanka (code of conduct) ee diiwaangelinta cod-bixiyeyaasha iyo doorashooyinka.
January 4,2016;,Maxkamadaha gobollada Awdal iyo Selel ayaa min 15-sano oo xabsi ah ku xukumay 10-qof oo lagu eedeeyay inay geysteen kufsi dhawaantan ka dhacay magaalada Lawyo-caddo oo ku taalla xuduudda u dhexeysa Somaliland iyo Jabuuti.
Nigeria:-Qarax Ka Dhacay Misaajid Ku Yaalla Dalka Nigeria Iyo Khasaaraha Ka Dhashay
23/04/2018 - 11:06:44